Xubno ka tirsanaa Al-shabaab oo lagu dilay howlgallo ka Socda Shabeelada hoose – AwKutub News
Xubno ka tirsanaa Al-shabaab oo lagu dilay howlgallo ka Socda Shabeelada hoose
Leave a Comment on Xubno ka tirsanaa Al-shabaab oo lagu dilay howlgallo ka Socda Shabeelada hoose
Maamulka gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegay in howlgallo ciidamada dowladda ay ka fuliyeen deegaanka Jilib Marka ay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose, Maxamed Ibraahim Barre ayaa tilmaamay in howlgalkan ay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsanaa Al shabaab tiro kalena ay dhaawaceen.
“Ciidamada xoogga dalka howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Jilib Marka, waxay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsanaa Al shabaab, tiro kalena waa looga dhaawacay, howlgalka ka dhan ah Al shabaabna weli waa socda”ayuu yiri guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose.
Guddomiyaha ayaa ka gaabsaday in uu ka warbixiyo waxyeellada soo gaartay ciidamada dowladda xilligii howlgalka uu socday.
Ciidamada dowladda oo garabsabaya kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM iyo Al shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ku dagaalamay deegaanka Jilib Marka ee duleedka magaalada Marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose.
Ururka Al-shabab kordhiyay weerarrada ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada ee magaalada Marka ee deegaannada ku hareeeysan kadib markii ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen gacan ku haynta magaalada.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa howlgallo ka dhan ah Al shabaab ka wada qeybo ka mid ah gobollada dalka.
Sidoo kale ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa kordhiyay duqeymaha cirka ah ee ay la beegsanayan dagaalyahannada Al-shabaab iyadoo maalmihii la soo dhaafay duqeymo ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Mudug lagu dilay ku dhowaad 50 xubnood oo ka tirsanaa Al-shabaab sida lagu sheegay warbixin uu soo saartay Africom
Tags: Alshabaab dagaal Dil Shabeelada Hoose Soomaaliya Wararka
Previous Entry Dilkii Khashogji : Trump oo sheegay in CIA-du aysan eedayn amiirka dhaxalsugaha ah ee Sucuduuiga
Next Entry Madaxweyne Farmaajo oo u dhoofay dalka Uganda